June 5, 2017 - Written by berka83 - Edited byberka83 Warsidaha PuntlandOne.com Oo muddooyinkii dambe Shaqadiisa Gaabis ku timid Sababo Farsamo Awgood, wuxuu hadda u baahan yahay Seddex Wariye oo Xirfad sare u leh Qoraalka Wararka iyo Qormooyinka kuwaas oo laga kala qaadanayo magaalooyinka waaweyn ee Puntland Sida Garowe, Gaalkacyo iyo Boosaaso.
QEEXITAANKA SHAQADA IYO SHURUUDAHA.
Shaqada uu wariyuhu qaban doono waa Qorista Warar Sugan, Warbixinno iyo Faallooyin la xiriira Xaaladaha ka cusub Puntland iyo Guud ahaan Soomaaliya, balse muhiimaddu waa Puntland.
1:- Wariyuhu waa inuu lee yahay ugu yaraan Shan Sano Oo Khibrad oo Saxaafadeed ah (At least five years journalism experience ) uuna ku wanaagsan yahay Luuqadaha Soomaaliga, English-ka iyo Carabiga, ( Waa inuu Qori karaa Soomaali sax ah oo aan lahayn Khaladaad, uuna si fiican u yaqaanaa Luuqadda Soomaaliga.), waana inuu qoray ugu soo shaqeeyay websites wax ku qora luuqadda Soomaaliga oo caan ah.
2:- Waa inuu heli karaa wararka ka dhacaya gobolka uu joogo, uuna lee yahay saaxiibo warbaahineed oo ka caawin kara wixii xog ah ama war ah ee uu ka maqnaa (Sida idaacado ka caawiya helista codadka iyo telefishino ka caawiya helista sawirrada iyo muuqaalada mararka ay muhiimka yihiin).
3:- Waa inuu haystaa qalabka wax sawira iyo kuwa codadka duuba oo tayo leh ( High Quality Camera and voice recorder).
4:- Waa inuu Aqoon u lee yahay Isticmaal-ka WordPress
5:- Waa inuu Shaqada siin karaa ugu yaraan 10 Saacadood oo waqtigiisa ka mid ah 24-kii saacba.
Dadka soo codsada shaqadaan waxaa lagu kala saari doonaa Khibradooda Shaqo ee ay haystaan iyo sida ay ugu fududahay inay shaqadaan qabtaan.
Haddaba haddii aad danaynaysid shaqadaan Wariye Noogu soo dir CV-gaaga iyo warbixin kooban oo kugu saabsan Shaqo@puntlandone.com
Maamulka sare ee Puntlandone.com